धनपतिले के सिकायो, के छुटायो? :: Setopati
विद्या राजपुत काठमाडौं, साउन ८
सुक्ष्म विषयवस्तुलाई संवेदनशील ढंगमा प्रस्तुत गर्न खप्पिस मानिन्छन्, निर्देशक दिपेन्द्र के खनाल।
रंगमञ्चबाट सिनेमातिर फड्को मारेका खगेन्द्र लामिछाने पनि त्यस्ता अभिनेता हुन्, जो जस्तोसुकै भूमिकालाई जीवन्त ढंगमा प्रस्तुत गर्न माहिर छन्।
व्यावसायिक र समीक्षक दृष्टिमा सफल ‘पशुपतिप्रसाद’ दिएको यो जोडीको दोस्रो फिल्म ‘धनपति’ सँग पनि दर्शकहरूले उस्तै नवीन विषयवस्तु र प्रस्तुतिको अपेक्षा गरेका थिए। यही असार २३ गते रिलिज भएको यो फिल्म राजधानीका हलहरूबाट ओर्लिसकेको छ।
फिल्म तराई मूलका मधेसीभाषी गरिब परिवारको पृष्ठभूमिबाट सुरु हुन्छ। धनपति (खगेन्द्र लामिछाने) को आर्थिक अवस्था कमजोर हुन्छ। एक रेस्टुरेन्टमा वेटरको काम गरेर उनी काठमाडौंमा परिवारको गुजारा चलाइरहेका हुन्छन्। काम, कोठा, पैसा सबै सानो भए पनि धनपतिको एउटा सपना ठूलो छ– छोरीलाई सरकारी स्कुलबाट हटाएर बोर्डिङ स्कुलमा पढाउने।
यही सपनालाई पछ्याउँदै उनी मरिमेटेर काम गर्छन्। बस भाडा जोगाउन साइकल चढ्छन्। सानो कोठामा दुःखजिलो गरेर बस्छन्। एक पैसा फुरमास गर्दैनन्। छोरीलाई स्कुल पनि साइकलमै पुर्याउँछन्।
उनकी श्रीमती (सुरक्षा पन्त) श्रीमानको दुःखमा सघाउन चाहन्छिन्। उनी धनपतिको आँखा छलेर अर्काको घरमा भाँडा माझ्दै पैसा जोगाउन थाल्छिन्। धनपतिलाई भने यो मञ्जुर हुँदैन। उनी श्रीमतीको पसिनाको कमाइ आँखैअगाडि जलाएर खरानी बनाइदिन्छन्। यसमा न श्रीमतीले विरोधको एक शब्द निकाल्छिन् न त धनपतिले श्रीमतीको पसिनाको मूल्य बुझ्छन्।
सम्पन्नबाट गरीब भएका धनपतिले यही दुःखका बीच आफ्नो परिवारलाई कसरी खुसी बनाउने प्रयास गर्छ? जिन्दगीका साना–साना खुसीमा पनि एउटा परिवारले कसरी आनन्द लिन्छ? यी सब विषय सुक्ष्म रूपमा उधिन्न खोजिएको छ, धनपतिमा।
मध्यान्तरसम्म फिल्म पारिवारिक समस्या र मानसिक द्वन्द्वमै बित्छ। त्यसपछि जब धनपति आफ्नो आर्थिक हैसियत उकास्न राजनीतिक कार्यकर्ता बन्छ, तब ऊ सामाजिक चेत भएको मानिसबाट सामाजिक चेत नभएको दानवका रूपमा परिणत हुन्छ। बन्द हड्ताल गर्दै एम्बुलेन्स, पानीको ट्यांकर समेत चल्न नदिइ अमानवीय व्यवहार गर्ने धनपतिलाई देखेर दर्शक बिचलित हुन्छन्।
फिल्मको मूलकथा छोरीलाई बोर्डिङ स्कुल पढाउने सपना पछ्याउँदै गरेको बाबुले अंगाल्ने बाटोमा केन्द्रित छ। तर, छोरीलाई बोर्डिङ स्कुलमै पढाउने सपना पछाडिको पृष्ठभूमि के हो? सरकारीमा पढाउँदा छोरीले के सिक्न सक्दिनन्? त्यति सानी छोरी आफू पनि बोर्डिङमै पढ्न बाबासँग किन किचकिच गर्छिन्? फिल्ममा यस्ता महत्वपूर्ण प्रश्न अनुत्तरित छन्। छोरीले स्कुलमा भोग्नुपरेको दुःख, पढाइको समस्या लगायत पृष्ठभूमि राखिएको भए मूलकथा अझ प्रभावशाली हुने गुञ्जायस थियो।
मध्यान्तरपछि धनपतिलाई फेरि राजनीतिमा फर्काउन नेताले लिएको रणनीति र उसको दुरुपयोगका घटनाले फिल्मलाई रोचक ढंगले अघि त बढाउँछ, तर मूलकथाको फिक्कापन त्यसले सम्हाल्न सक्दैन। बरु फिल्मको विषयवस्तु नै कतै बहकिएजस्तो महसुस हुन्छ।
यति मात्र होइन, धनपतिलाई जसरी एकाएक सडकमा आगो बाल्ने, राजनीतिका नाममा व्यक्तिगत प्रतिशोध साँध्ने र भौतिक सुखमा रमाउने पात्रमा बदलिएको देखाइएको छ, त्यो पनि स्वाभाविक लाग्दैन। कथाको यो ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ लाई निर्देशक तथा लेखकले विश्वसनीय ढंगमा झल्काउन सकेका छैनन्।
जब मानिस कुनै सपना देख्छ, जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि त्यो सपनालाई पछ्याउन लागिपर्छ भन्ने फिल्मको सन्देश हो। तर, यही सपना पछ्याउने क्रममा पैसा र शक्त्तिले बहकिएर उसको व्यक्तित्व नै फेरिएको र आफ्नो सपनालाई बिर्सेर बाटोमा भड्किएको अस्वाभाविक परिवर्तनले दर्शकलाई अलमलमा पारिदिन्छ।
फिल्ममा गरीबीको पराकाष्ठा झल्काउन धनपतिको जेठानको परिस्थितिलाई बिम्बका रूपमा देखाइएको छ। एउटा मानिस सामान्य गुजारा चलाउन पनि नसकेर बिदेसिन बाध्य हुनुपरेको घटनाले फिल्मको विषयवस्तुमा सहज प्रवेश गराउँछ।
धनपतिका मुख्यकेन्द्र खगेन्द्र लामिछाने नै हुन्। सिंगो फिल्म आफ्नो काँधमा बोकेका खगेन्द्रले त्यही बमोजिम आफ्नो पात्रलाई न्याय गरेका छन्। संघर्ष र मानसिक द्वन्द्वको दुवै घडीमा उनको अभिनय जीवन्त छ। श्रीमतीको भूमिकामा देखिएकी सुरक्षाको मुस्कान, लवज र हेराइले दर्शकलाई मोहित पार्छ।
पशुपतिप्रशादबाट सबैको प्रशंसा कमाएका निर्देशक दिपेन्द्रको यो प्रस्तुतिलाई केही खास मान्न सकिन्न। सूक्ष्म कुरालाई प्रबलतासाथ प्रस्तुत गर्ने क्षमताका दिपेन्द्रले यो फिल्ममा धेरै कुरा ‘मिस’ गरे। फिल्ममा किन धनपति राजनीतिमा लाग्न चाहँदैन भन्ने अन्तिममा मात्र प्रस्तुत गर्नु र छोरीलाई बोर्डिङ स्कुलमा पढाउने सपनालाई अझ कसिलो रूपमा नदेखाउनुले यसपालि उनको प्रस्तुति खल्लो बनेको छ। बन्द–हड्तालबाट वाक्क भएका जनतालाई अनावश्यक बन्द–हड्तालका दृश्य राखेर सहानुभुति लिने प्रयास पनि परिपक्व देखिन्न।
दर्शकले निकै आश गरेका दुई व्यक्ति दिपेन्द्र र खगेन्द्रको जोडीले समग्रमा फिल्मलाई मनोरञ्जनपूर्ण त बनाएका छन्, तर आफ्नो परिचित छविअनुसार विषयवस्तु संवेदनशील रूपले पस्कनबाट चुकेका छन्।
फिल्म 'धनपति'को ट्रेलर
प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन ८, २०७४, ०७:५३:२१